Hilton Hotels any Myanmar no mandefa ny fandaharana "CoffeeBriques"
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Hilton Hotels any Myanmar no mandefa ny fandaharana "CoffeeBriques"
Hilton Hotels any Myanmar dia nandefa fandaharana iray izay mamadika ny fako kafe ho lasa "cafeBriques" izay azo ampiasaina amin'ny fandrahoana sakafo sy ny fanafanana. Ny dingana tsotra hanaovana kafeBriques dia naseho voalohany tamin'ny asabotsy lasa teo tao amin'ny Hilton Mandalay, fananan'ny Hilton voalohany tao Myanmar izay nanangana ny programa.
Ny briques kafe dia solon-tsolika ara-tontolo iainana amin'ny arina mahazatra. Hilton dia manatanteraka ny programa coffeebriques ao anatin'ny fanoloran-tenany maharitra any Myanmar.
“Taona iray niavaka ho an'i Hilton ny 2019 rehefa mankalaza ny faha-100 taonantsika. Miaraka amin'ny programa CoffeeBriques, mikendry ny hanamafisana ny fanoloran-tenanay izahay amin'ny andraikitra ara-tsosialy ho an'ny tombontsoan'ny fiarahamonina. Amin'ny alàlan'ny fanodinana ny tany misy kafe, dia tsy ny vahaolana angovo madio ihany no omenay fa ny fanalefahana ny fako mankany amin'ny fanariam-pako na ny lalan-drano voakenda, "hoy Ramatoa Veronique Sirault, Cluster General Manager ao Hilton ao Myanmar.
Maherin'ny 140 kilao ny velaran-kafe efa nohaonina nandritra ny roa volana no maina, noana ary novolavolaina ho briquette. Ireo dia ampiasaina ho safidy hafa amin'ny arina any amin'ny hotely Hilton.
Ny coffeebriques dia ampiasaina amin'ny famonoana BBQ. Ny CoffeeBriques dia mahomby kokoa noho ny arina satria misy gazy karbonika sy kafe izay mamokatra ny lelafo manga manana hafanana ambony noho ny arina. Ny programa CoffeeBriques ao amin'ny Hilton dia tanterahina miaraka amin'ny Diversey.
Any Myanmar dia ny arina sy ny kitay ihany no tena loharanon-tsolika handrahoana sakafo. Amin'ny alàlan'ny fampidirana ny programa coffeebriques, manantena i Hilton fa hanome aingam-panahy ireo vondrom-piarahamonina sy orinasa eo an-toerana hanandrana hanamboatra ny CoffeeBriques azy manokana na hitady solika hafa ary mpiorina ara-tontolo iainana. Ny fako kafe voaverina indray dia mamoaka hatramin'ny 80 isan-jato kely kokoa ny emissions raha toa ka miafara any amin'ny fanariam-pako ny tany. Ny dingan'ny fanaovana CoffeeBriques koa dia tsy mitaky fandoroana ka tsy misy fandotoana firy.
“Ny fandringanana ny ala dia antony lehibe mahatonga ny fiovan'ny toetr'andro. Ity programa ity dia manampy amin'ny fampihenana ny fampiasana arina arina sy kitay any Myanmar. Manantena izahay fa hitarika amin'ny alàlan'ny ohatra ary hanome aingam-panahy ny mpiasanay sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana mba handray dingana tsotra hamonjy ny Reny Tany, "hoy Rtoa Veronique nanampy.
Hilton dia miasa hotely telo any Myanmar izao: Hilton Nay Pyi Taw, Hilton Mandalay ary Hilton Ngapali Resort & Spa. Ny orinasa dia manana trano fandraisam-bahiny telo ao amin'ny fantsom-pandrosoana izay hisokatra ao amin'ny Inle Lake, Bagan ary Yangon mandritra ny taona ho avy.
Tompon'andraikitra fizahan-tany Qatari: 'Tsy misy visa ho an'ny fahavalo!' Governemanta Qatar: 'Tsy izany!'
Ny minisitry ny fizahan-tany ao Jamaika dia hanome ny heviny amin'ny fanombohana ny fihaonambe momba ny fampiasam-bola amin'ny Hotely Karaiba sy ny fihaonamben'ny hetsika